सरकारविरुद्ध लागेपछि माधव नेपाल, भीम रावललाई सधैँका लागि पार्टीबाटै निकाल्नेसम्मको तयारी ! (हेर्नुहोस् भिडियो) — newsparda.com
सरकारविरुद्ध लागेपछि माधव नेपाल, भीम रावललाई सधैँका लागि पार्टीबाटै निकाल्नेसम्मको तयारी ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षीहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै नेकपा एमालेले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षीहरूलाई सहयोग गरेको सूचना बालुवाटार पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली फायर भएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षसँग अब एकै ठाउँमा बस्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरुमाथि जस्तोसुकै कारबाही हुने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तीले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई सधैँका लागि पार्टीबाटै निकाल्ने तयारी रहेको संकेत गरेको हो । ईमेज टेलिभिजनको हटसिटमा जगदीश खरेलसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालको अहंकारसँगै बस्न नसक्ने मुख्य कारक रहेको जिकीर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चाहना बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने भए पनि देशको आवश्यकता तत्काल चुनाव भएकाले मुलुक त्यतैतिर जाने दाबी पनि गरे ।सरकारविरुद्ध कुनै पनि बेला अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्नेतर्फ सचेत रहेको र त्यसका लागि आफू तयार रहेको पनि उनले बताए ।
मधेशका मुद्दा सम्बोधनका लागि आफू तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । (हेर्नुहोस् भिडियो)
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमाथि कारबाही गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।नेपाल समूहका सांसदमाथि कारबाही गर्दा वैधानिकताको प्रश्न नआओस् भनेर आइतबार आकस्मिकरूपमा केन्द्रीय आयोजक कमिटीको बैठक बोलाइएको एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको सूचना पाएको र फ्लोर क्रसको सम्भावना रहेकाले कारबाही गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
कर्णाली प्रदेशकै प्रकरण नदोहोरियोस् भनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ । पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी मौजुदा कानुनमा पार्टीका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख भएकाले पुनः आयोजक कमिटीको बैठक बोलाइएको ती नेताले बताए ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्पष्टीकरणसोधिएका २७ सांसदलाई कारबाही गर्ने(नगर्ने निर्णयको अधिकार स्थायी कमिटीलाई दिएको थियो ।वैशाख १० गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका २७ जनाको अवस्थाको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका िथए । सांसदबाट निलम्बन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोधे पनि पार्टी परित्याग नगरेको अवस्थामा नेपाल समूहका सांसदको पद नजाने अवस्था रहेकाले कारबाही प्रक्रिया रोकिएको हो । नेपाल समूहका सांसदहरू भने सांसदको पद खोस्न नसकोस् भनेर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
पार्टीका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने केन्द्रीय आयोजक कमिटीको बैठकले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन देशव्यापीरूपमा कार्यकर्तालाई जनचेतानामूलक अभियानमा संलग्न हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए । अध्यक्ष ओलीले यसअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नेपाल समूहका नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै स्थायी कमिटी गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गरेका िथए ।
नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको खबरप्रति सशंकित हुँदै अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहमा लागेका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण साेधेका िथए। कांग्रेससँगको भेटमा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, खनाल–नेपालले त्यसमा साथ दिने सूचना बालुवाटारमा पुगेपछि हतारहतार स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतको दाबी छ । अधिकांश सांसदहरूले स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् ।